inguqulelo 0.8.3 – shortcode le widget ngayo
UCanzibe 30, 2012 ngokuthi umnikelo 11 izimvo
Le nguqulelo ayizinzise ezinye bugs kwaye idibanisa inkxaso ukuze shortcode nice ekuvumela ukuba babeke widget ngaphakathi isithuba
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: engephi, khulula, shortcode
EyeThupha 2, 2012 ngexesha 6:57 pm
Ungandichazela ukuba eli iplagi usebenzisa curl okanye libcurl ?
EyeThupha 2, 2012 ngexesha 8:31 pm
Ndicinga libcurl ayo kunye nemisebenzi ilayibrari phpcurl
EyeThupha 15, 2012 ngexesha 8:45 mna
Xa uza ukuba ndinikhululele inguqulelo entsha, nawo onke amabala?
EyeThupha 15, 2012 ngexesha 11:36 mna
Kamsinya nje ulungele… 🙂
EyoMsintsi 11, 2012 ngexesha 8:37 mna
sinako phi ukufunda okungakumbi ngalo shortcode?
Umzekelo, ukubeka indlela ibe WP eyakhelwe-kwiimenu?
Kwaye kutheni iiflegi ezingavezi xa ndiwusebenzisa (kuphela ibhokisi)?
EyoMsintsi 11, 2012 ngexesha 12:31 pm
Uyakwazi ukubona zonke iinkcukacha malunga shortcodes ku http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Andazi ukuba zingasetyenziswa ngaphakathi kwiimenyu eyakhelwe-ngaphakathi, kodwa ungasoloko uzame.
Ukuba iindwe ngeke ukubonisa, ukuthumela le url ukuphendula kwaye ndiya kukuvuyela ukujonga ukuba.
EyoMsintsi 16, 2012 ngexesha 6:42 pm
Nazi ikhonkco, kwaye ubone ibhokisi yokhangelo kwi kwikona engasentla ekunene.
Kwaye ke shortcode endinalo
[du widget ="yenarha / tpw_flags_css.php"]
Kunjalo nje, ngayo kwinqaku lakho malunga shortcodes onokuzikhankanya oku enye ukusetyenziswa ezininzi widget, kodwa akukho ezinye imiyalelo, ukuba ulungise indlela. Umzekelo, indlela ukususa ezinye iiflegi, ukufometha utshintsho, uboniso drop-phantsi, njl?
EyoMsintsi 16, 2012 ngexesha 10:16 pm
Nangoku abazange bayifumane link, nceda zama contact senze.
ukususwa iflegi ngokuphathelene, le widget ibonisa kuphela iilwimi ukuba iqwalaselwe ukuze yezicwangciso.
idrophu mabenze kunye nezinye widgets ukuze kukhethwa ngokusebenzisa i Ifayile widget eyahlukileyo, ukubona widgets weefayili we plugin
EyoMsintsi 17, 2012 ngexesha 6:08 pm
Uxolo, asizange sibandakanye ikhonkco. Yinto http://bit.ly/QnJWAf
Kanti akukho iindwe nakuba.
EyoMsintsi 17, 2012 ngexesha 6:18 pm
Andivanga, ukuba ndithetha njani, mhlawumbi ngegama lakho lokuqala?
bakhumbula nje, ukusuka kwixesha elide kakhulu kudala, ekubeni efakwe transposh plugin, xa ukuba isebenze, le menu ekhohlo kwi Dashboard liyalahleka. Xa plugin deactiveated, imenyu kuvela kwakhona. Ingaba unayo i zingazi?
EyoMsintsi 28, 2012 ngexesha 6:04 pm
Nazi ezimbalwa iingcebiso eyayiza kakhulu ukuphucula ukusebenziseka-plugin kwaye wenze kum bancoma ukuba endisebenza nabo kunye namaqabane. (Isenokuba uye wacebisa phambi, kodwa andifumananga naluphi na ulwazi).
1. Ukusebenzisa iindlela ezimfutshane yezitshixo kunye nezinye iindlela ngokukhawuleza ukutshintshela ibhloko okubhaliweyo ecaleni ukuguqulela ngesandla kwi kwiphepha.
2. Yenza i plugin ukuqonda iidilesi ze-imeyile, URLs kunye nezinye iziqulatho ukuba akufuneki nanini uguqulelwe.
3. Faka i ukhetho ukukhuphela-ukucola inguqulelo lonke ikhasi ukuba. Ngamanye amaxesha kuba lula ukuguqulela i umhleli wangaphandle, kwaye ngamanye amaxesha sele unayo ukulungele uguqulelo.
Uya kuza emva ezingaphezu!